Umqulu PCB Assembly - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
I-PCBFuture igxile kwiinkonzo zendibano ze-PCB ezinomthamo ophantsi kunye neenkonzo zendibano yeVolume ephakathi kunye nomsebenzi olungiselelweyo.Sixhotyiswe ngamaziko okuvelisa akumgangatho ophantsi ukuya-phakathi wendibano yePCB yesiko.Kwaye sinemizila yendibano emininzi enokuthi ilungelelanise kwaye iguqule ngokweemfuno zemveliso ye-elektroniki kunye neenkcukacha ngexesha elifutshane.
Sithatha unonophelo kuyo yonke indibano ye-PCB evela kwi-PCB yokwenziwa, ukuthengwa kwezixhobo, indibano ye-SMT, ngendibano yomngxuma, uvavanyo kunye nokuhanjiswa.Ukuba ngumvelisi ohamba phambili wendibano ye-elektroniki enikezela ngeenkonzo zendibano yePCB yevolumu, siyaqinisekisa ukuba imveliso yakho ayinabungozi ngokupheleleyo ngexabiso eliphantsi.
PCBFuture'sUbunakho kwiNdibano yePCB Volume
Siyingcali yendibano yebhodi yesekethe kwishishini elibonelela ngenkonzo yendibano yebhodi yesekethe ethembekileyo kakhulu.Iingcali zethu ezinamava nezinoxanduva zinceda iPCBFuture ukuba inike abathengi bethu ezona ndibano zifanelekileyo njengoko kulindelwe kwizicelo zabo ezithile.
• Uyilo loVavanyo (DFT)
• UYilo lokuVelisa (DFM)
• Indibano ye-BGA
• Ukubekwa kwecandelo lokudibanisa i-SMT ukusuka ku-0402 ukuya kwi-QFP entle
• Indibano ehambelana neRoHS
• Ngokusebenzisa i-solder ye-PCB yomngxuma
• Inkonzo ye-PCB yokuthengisela ngesandla
• Iindibano zePCB ezingakhokhelwanga
• Ukuchaneka kwecandelo lokukhokela
• Ukungacoceki kunye nenkqubo yokuhlamba amanzi
Iinzuzo zethuUmthamo PCB Assembly:
• Zonke iibhodi zethu zesekethe eziprintiweyo ziyi-100% yovavanyo (E-test, solderability test, FQC njalo njalo).
• Ukubonelela ngenkonzo yendibano ye-PCB yomboniso yokuvavanya phambi kokuveliswa kobuninzi.
• Qala imveliso yobuninzi emva kokuba umthengi aphumelele lonke uvavanyo okanye unikeze imveliso yendibano ye-PCB okwesibini.
• Ukwenziwa kohlolo lwe-AOI kunye nohlolo olubonakalayo kuyo yonke inkqubo yokudityaniswa kwePCB.
• Ukusebenzisa uhlolo lweX-reyi kwi-BGA kunye nezinye iipakethe ezintsonkothileyo.
• Ukuba kukho nayiphi na imiba yendibano efunyenweyo, iinjineli zethu ezinamava zingazisombulula phambi kokuba zithunyelwe.
• Sineqela elinamava kakhulu ukusombulula yonke imiba yendibano kwaye sithumele iiPCBs ezikumgangatho ophezulu kuwe ngexesha.
Sinentembelo ekuboneleleni ngeyona ndlela ilungileyo yokudityaniswa kwenkonzo yendibano ye-PCB yokujika, umgangatho, ixabiso kunye nexesha lonikezelo kwi-odolo yendibano ye-PCB yebhetshi encinci kunye ne-Mid batch Volume ye-PCB.
Ukuba ukhangela umenzi indibano PCB efanelekileyo, nceda uthumele iifayile zakho BOM neefayile PCB kusales@pcbfuture.com.Zonke iifayile zakho ziyimfihlo kakhulu.Siza kukuthumelela ikowuti echanekileyo kunye nexesha lokukhokela kwiiyure ezingama-48.